ကျေးလက်ကလေးစောင် PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ – အဆိုပါ Tailoress
Rompers / အိပ်စက်ခြင်း suite
Romper / အိပ်စက်ခြင်း suite
နေအိမ် / ပရိဘောဂ / ကလေးစောင် / ကျေးလက်ကလေးစောင် PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
SKU: SaBaBlPDSePa-1 categories: ကလေးစောင်, ကလေးများ, ပရိဘောဂ Tags:: ကလေး, စောင်, ကလေးများ, ပန်း, furnishing, quilt
Take the first row and place rights sides together with the next. တွယ်အပ်, stitch and press. Repeat for each subsequent row. Ensure to match seam lines.
Repeat step5for each border piece on the front and back. Place back and front blanket pieces right sides together. တွယ်အပ်, stitch and press.
အဆိုပါဝယ်ယူ Safari ကကလေးစောင် 1 PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
£ 4.37 – £ 8.05 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
£ 3.68 – £ 5.18 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
တစ်ဦးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ ပစ္စည်းများ ဦးထုပ် ပစ္စည်းများ အလိုက်အဝတ်အစား ကလေး ပစ္စည်းများ ကလေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Leggings Preemie ကလေး Rompers / Sleepsuits လုပ်ကွက် ကလေးများ အမြိုးသမီးမြား ကလေးများ ပစ္စည်းများ အလိုက်အဝတ်အစား အဝတ်အစား အဝတ်အစား Leggings Romper / အိပ်စက်ခြင်းဝတ်စုံ ထိပ် ခွေး ပစ္စည်းများ အမျိုး ခွေးဘီလူး Dachshunds ထီးတပါး & Whippets အဝတ်အစား ဂျာကင်အင်္ကျီ Jumper Pyjamas ထိပ် အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေ ပရိဘောဂ ကလေးစောင် အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ Menswear ကို T-ရှပ်အင်္ကျီ Papercraft ပြင်. ခွေး Jumper TEST Uncategorized အမြိုးသမီးမြား ပစ္စည်းများ Coats / ဂျာကင်အင်္ကျီ အဝတ်အစား အဝတ်အစား Jumper စားဆင်ယင် Jumpsuits Lingerie ဇာတ်လမ်းတိုများ ထမီ ရေကူးဝတ်စုံ ထိပ် ဘောင်းဘီရှည် Leggings အင်္ကျီ
ရှစ်သစ်ပင်များကုမ္ပဏီအားဖြင့် Dachshunds များအတွက်နယူး Jasra Tee
ခွေးဘီလူးများ PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာများအတွက် Jasra Tee